Iyo Dhata Onboarding iri Kubatsira Multi-Channel Kushambadzira | Martech Zone
Iyo Dhata Onboarding iri Kubatsira Multi-Chiteshi Kushambadzira
Chitatu, June 17, 2015 Chipiri, June 16, 2015 Douglas Karr
Vatengi vako vari kukushanyira - kubva kunharembozha yavo, kubva pahwendefa ravo, kubva piritsi ravo rebasa, kubva kudesktop yavo yekumba. Ivo vanobatana newe kuburikidza nesocial media, email, pane yako mobile application, kuburikidza newebsite yako uye munzvimbo yako yebhizinesi.
Dambudziko nderekuti, kunze kwekunge iwe uchitsvaga iyo yepakati yekupinda kubva kwese sosi, yako data uye yekutevera yakaputsika mune akasiyana akasiyana analytics uye kushambadzira mapuratifomu. Mupuratifomu yega yega, uri kutarisa maonero asina kukwana eiyo data uye hunhu hwakabatana nemutengi kana tarisiro.
Chii chinonzi Data On-Boarding?
Dhata Pa-Bhodhi inonongedza yako data revatengi kubva kune akasiyana dhatisheni sosi uye kunyangwe mune-chitoro chiitiko nekufananidza masiginecha edhijitari pane iyo data. Mafoni ekushandisa, semuenzaniso, anokwanisa kuona kiyi inosanganisirwa neyakaomarara. Mabhizimusi uye vanhu vanogona kuve geo-inowanikwa uye kuzivikanwa pane chaiyo IP nzvimbo. Kuvimbika makadhi, email kero uye logins zvinogona kubatsira mukuziva futi.
Dhata paneboarding inorerutsa kushambadzira kwakawanda-chiteshi, ichikupa simba kuti ugadzire zvirinani zviitiko zvevatengi uye ununure mhedzisiro inogona kuyerwa. Via LiveRamp
Pa-Boarding vanopa vanogona kuenzanisa mutengi pazvinhu zvese zve data uye votanga kuteedzera risingazivikanwe dhata kusvikira mushanyi aburitsa yavo kuziva uye maprofiles akabatana. Makambani akaita saLiveRamp anotora data kuyambuka a plethora yechitatu bato kushambadzira uye kushambadzira mapuratifomu kusimudzira iwo ma profiles uye kuvimbisa iwo chaiwo.
Izvi zvinopa nzira ine simba risinganzwisisike kuti unzwisise kuti vatengi vako vari kuzvibata sei, ndeupi kushambadzira kunogona kutariswa uye kunyanya riini uye nzira ipi yekuvatengesa nayo.
Tags: data pabhodhidata kubhodhichiropamulti-chiteshiyakawanda-chiteshi kushambadzira
9 Kumhara Peji Zvikanganiso Iwe Zvaunofanira Kudzivisa